Vuma ngomshini wokusika we-laser |
1, Ukufakwa Imvelo Chiller ifakwe isondo lendawo yonke, Iyunithi kufanele ivikeleke endaweni enomoya omuhle ukuqinisekisa ukushisa okuhle kokushisa. Njengoba kukhonjisiwe esithombeni esifanele, kufanele kube nesikhala semitha eli-1 ezungeze iyunithi, akumele kube khona okuvimba, nokuphakama kwe-abov ...
Intambo Yomshini Wokushisela I-Laser
Wire ubukhulu 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm. 1.6mm Uma ukushuba kwempahla kungaphansi kuka-1mm, igebe eliphakathi kwezingxenye ezimbili kufanele libe ngaphansi kuka-0.15mm Uma ubukhulu beshidi bungaphezu kuka-1mm, igebe u-0.7mm wire diamter 1mm, igebe 1.2mm, ububanzi be-wire 1.6mmNgenxa yokuthi impahla incane kakhulu, uma igebe likhulu kakhulu, kuncibilikile ...
Indlela ukuhlukanisa ikhwalithi ishidi kanye ipayipi fibre laser cutting umshini
Njengoba i ngempumelelo ukucutshungulwa umshini, ishidi kanye ipayipi ezimbili-njongo fibre laser cutting umshini kabanzi ukucubungula kanye yokukhiqiza umkhakha. Kodwa-ke, abantu abaningi abalazi ikhwalithi yomkhiqizo lapho bekhetha ukuwusebenzisa, ngakho-ke bangahlulelwa kanjani? Okulandelayo, iCheeron Laser izo ...
Umphumela wejubane kwikhwalithi yokusika
1. Umphumela wejubane elisheshayo kwikhwalithi yokusika: * Kungadala ukwehluleka ukusika nezinhlansi ezitshizayo; * Ezinye izindawo zinganqunywa, kepha ezinye izindawo azikwazi ukunqunywa; * Yenza ukuthi yonke indawo yokusika ibe mkhulu, kepha kukhona amabala ancibilikayo; * Ijubane lishesha kakhulu, okwenza ishidi libe b ...
Yini ebangela ukuphambuka komshini wokusika we-fiber laser enqubo yokusika?
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe basekhaya, lapho izinkampani eziningi zisebenzisa imishini yokusika i-fiber laser yokucubungula okokusebenza, azikwazi ukugcina izindleko kuphela kepha futhi zithuthukisa ukusebenza kahle kokukhiqiza, kepha kunezizathu eziningi zamaphutha enqubo yokusika nemiphumela emibi yokusika ngesikhathi .. .
Yiziphi izinyathelo zokuqothula umshini wokusika we-laser?
Izikhala ze-1.Parts Ngokuvamile, lapho usika amapuleti aminyene namapuleti ashisayo, ibanga eliphakathi kwezingxenye kufanele likhulu, ngoba ithonya lokushisa kwepuleti elijiyile nepuleti elishisayo likhulu. Lapho usika amakhona kanye nehluzo ezincane, kulula ukushisa imiphetho futhi kuthinte ikhwalithi yokusika. ...
Kuyini ukusika okungu-HIGH-POWER laser
Usebenzisa i-high energy density laser beam njengethuluzi lokusika ekunciphiseni okwenziwe ngomshini izinto eziphezulu-POWER laser cutting ezimele? Ikhwalithi yokusika ephezulu Ukusebenza kahle okuphezulu Okungathintwa Ukusika Izinto Ezihlukahlukene Ukuzivumelanisa nezimo nokuzivumelanisa nezimo Ungachaza kanjani amasampuli afanelekayo? Ungayisika kanjani ikhwalithi ...
Ukugcinwa Of Laser Cutting Izinsiza kusebenza
Eminyakeni yamuva, ngokuthuthuka okuqhubekayo kobuchwepheshe bomshini wokusika we-laser waseChina, imakethe engumnikazi wayo iyanda. Ekuthuthukisweni kwesikhathi esizayo, imishini yokusika i-laser ingasetshenziswa ezimbonini ezahlukahlukene. Okwamanje imishini yokusika i-laser inamandla amakhulu yokuhlomisa ...
Laser Welding Machine Izinzuzo
Izinzuzo zomshini wokushisela we-laser Ukuzivumelanisa nezimo: kufanele ukushisela noma imiphi imikhiqizo emise kahle Ukusebenza kahle • ijubane lokushisela lishesha ngokuphindwe ka-2-10 kunejubane lendabuko lokulungisa insimbi • lihambisana nezinhlobonhlobo zamamodeli, nezikhathi ezimfishane zokushintshwa Ikhwalithi ephezulu yokushisela • cha ukuhlanekezela ...
Laser generator Anti-okokuqandisa Wemiyalo
Isimo sezulu siyabanda kakhulu. Ikhasimende liyakhathalela ngemibuzo yokulwa nokubanda kwe-laser generator njengoba kungezansi: Yini ukushisa kokugcina kwe-laser generator? Uma idinga uketshezi olubandayo? Ungayivikela kanjani yonke ipayipi lokupholisa amanzi kanye ne-c ...
Ukugcinwa okuyisisekelo kohlelo lokuthambisa
Uhlelo lokuthambisa lomshini gcina ukusebenza okujwayelekile kubaluleke kakhulu emshinini. Idinga ukwenza isondlo nsuku zonke. Uma kungekho ukuthambisa okuhle komshini, njengemoto awunawoyela wenjini. Ngakho-ke kubi kangakanani ngomshini ongawufanekisa. Umshini Lubrication Basic Umzila ...